Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nepal » Haweeneydii ugu da'da yareyd ee Afrikaan ah oo qabsatay Mount Everest
Safarka Dalxiiska • dhaqanka • Wararka Nepal • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Dakik oo ku taal Mount Everest
Haweeney Tanzaaniyaan ah iyo gabadha ugu yar ee Afrikaan ah ayaa qabsatay buurta Everest, iyagoo dhigay rikoor ah inay tahay haweeneydii ugu horreysay ee Tansaaniya ah ee gaarto meesha ugu sareysa adduunka.
Rawan Dakik, waa haweeney 20 jir ah oo reer Tansaaniya ah, waxay si guul leh u fuushay buurta Everest ee Nepal dabayaaqadii bishii May ee sanadkan.
Waxay sheegtay in hadafkeeda ah inay gaarto shir madaxeedka adduunka ugu sareeya ay fududeysay leyliskeedii hore ee ahaa inay fuusho buurta Kilimanjaro, oo ah tan ugu sareysa Afrika.
Waxay si guul leh ku cabiray buurta Kilimanjaro in ka badan 5 jeer.
Rawan waxay dib ugu soo laabatay Waqooyiga Tanzania iyadoo ay soo dhaweyn balaaran kala kulmayaan waalidkeed iyo qayb ka mid ah saraakiisha dalxiiska Tansaaniya kadib markay joogtay Nepal mudo 2 bilood ah intii ay ku guda jirtay hawlaheeda fuulitaanka Mount Everest.
Waxay u kacday inay noqoto muwaadin labaad oo reer Tansaaniya ah oo gaara halka ugu sareysa Mount Everest, 9 sano kadib qibradley xamaali ah oo katirsan Mount Kilimanjaro, Mr. Wilfred Moshi, ayaa calanka Tanzania ka taagay buurta ugu dheer aduunka. Wuxuu dhigay rikoorkii bishii May 2012 ka dib markii uu 10 toddobaad ku qaatay socodka buurta.
Saray Khumalo waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee qabsata Mount Everest 16-kii Maajo, 2019, kadib markii ay dhowr safarro ku fuulay buurta Kilimanjaro ee Tansaaniya iyo buuraha kale ee adduunka si ay lacag ugu ururiso waxbarashada carruurta iyo maktabadaha Afrika.
Sare u kaca buurta Everest ee xadka Nepal iyo Shiinaha ayaa ah tan ugu sareysa adduunka oo dhan 8,850 mitir oo ka sareysa heerka badda.
Sir Edmund Hillary iyo nin u dhashay Nepalese Sherpa oo ah buurta Tenzing Norgay ayaa ahaa dadkii ugu horeeyey ee gaadha shirwaynaha buurta May 29, 1953.
Xuduudaha Himalayan ee ah halka Mount Everest uu ku yaalo waxaa kor loogu qaaday ficil tectonic ah iyadoo Indian-Australian Plate ay u dhaqaaqday dhanka waqooyi dhanka koonfureed waxaana lagu qasbay hoos hoos plate Eurasian ka dib markii ay isku dhaceen 2 taarikada meel 40 ilaa 50 milyan sano ka hor. Himalayas naftooda waxay bilaabeen inay kacaan qiyaastii 25 ilaa 30 milyan oo sano ka hor, Himalayas-kii weynaa wuxuu bilaabay inuu qaato qaabkooda hadda xilligii Pleistocene Epoch, qiyaastii 2,600,000 ilaa 11,700 sano ka hor.
Everest iyo cidhifyada ku hareeraysan ayaa qayb ka ah buur weyn oo ballaadhan oo samaysa barta, ama gunti, ficilkan farsamo ee Himalayas-ka Weyn. Macluumaadka ka imanaya aaladaha meelaynta adduunka ee ku yaal Everest ilaa dhammaadkii 1990-meeyadii waxay muujinayaan in buurtu ay sii socoto in ay u dhaqaaqdo dhawr inji illaa woqooyi-bari oo ay kor u kacdo qayb ka mid ah inji sannad kasta, sii kordho sannad kasta.